Himalaya Dainik » ‘महानायक’ प्रकरणः निश्चलको भाइरल भिडियोपछि श्याम र स्वस्तिमाको दोहोरी ?
‘महानायक’ प्रकरणः निश्चलको भाइरल भिडियोपछि श्याम र स्वस्तिमाको दोहोरी ?
‘महानायक’को बिषयमा सुरु भएको ‘विवाद’ र चर्चा अझै चलिरहेको छ । कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले एक अन्तर्वातामा महानायकको बारेमा राखेको भनाइ पछि यो बिषयले निकै चर्चामा छ ।
चर्चा कै क्रममा निर्देशक निश्चल बस्नेतले केही बर्ष अगाडि दिएको एक अन्र्तवार्ताको एउटा क्लिप भाइरल नै बन्यो। उक्त क्लिपमा उनले नेपालमा कोहीपनि सुपरस्टार नभएको भनेर जवाफ दिएको सुन्न सकिन्छ ।
उनको भनाई भाइरल भएपछि अमेरिकामा रहेका निर्देशक श्याम भट्टराइले एउटा स्टाटस लेखे । उनले राजेश हमालको हैसियतको बिषयमा बोल्ने निश्चलको कुन चलचित्र हिट भयो ? भनेर प्रश्न सोधेका थिए । उनले स्टाटसमा ‘तिमी र तिम्रो श्रीमतिको पासपोर्टको कपी पनि मसँगै छ, धेरै नबोल’ भनेर पनि लेखेका थिए ।
श्यामको यो स्टाटसपछि नायिका स्वस्तिमा खड्काले स्टाटस लेख्दै भनेकी छिन्– ‘मैले कार्यक्रमको लागि पठाएको पर्सनल डकुमेन्टलाई लिएर यस्तो खालको ध म्की आउनु आफैमा गत्तल प्रवृत्ती हो, त्यसरी व्यवसायिक कामका लागि पठाएको व्यक्तिगत जानकारीको कुराले विना कारण धम्काउनु आफैमा व्यवसायिक काम होइन । उहाँ जस्तो प्रतिष्ठित अवार्डको आयोजकबाट मैले यस खाले गतिविधीको अपेक्षा गरेको थिइनँ ।’
त्यसपछि श्यामले जवाफ दिदै लेखेका छन्–‘राजेश हमाल, भूवन केसी, शिव श्रेष्ठ जस्ता नेपाली चलचित्रका महान हस्तीहरुलाई सम्मान गर्न लागिएको अवार्डमा यहाँहरुको उपस्थित हुन इच्छा देखाएर प्रक्रियाको लागि पासपोर्ट कपि मलाई दिनुभएको हो, सो बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि नदिएको र नलिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
‘यसरी उक्त समारोहमा उपस्थित हुन अभिप्रेरित गरेका निर्देशक निश्चल बस्नेतको हृदयभित्र हाम्रा तिन अंग्रजहरुप्रतिको सम्मान भने कुन स्तरमा रहेछ भन्ने कुरा सामाजिक संजालमा प्रशारणमा आएको देखेपछि हामी चलचित्र प्रेमी कसैलाई पनि अवश्य खुशी बनाएन र त्यस्तो थियो भने किन इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो त भन्ने आशयमा लेखिएको स्टाटसले तपाइलाई पर्न गएको असुविधाप्रति म चिन्ता व्यक्त गर्दछु ।’